Xaaji Cabdi La Xabaalye, Maxeynu Ku Xusuusanaa
Wednesday May 15, 2019 - 12:13:44 in Articles by Hadhwanaag News
Umad waliba waxey leedey dad tacab galiyey danta guud,
shacabkana tadxiyad (sacrifice) ama naf-u hurid bilaash ah gashaday.
Tanina waxey u noqotaa dadweynaha halbeeg wax Ku qaadasho togan ku yeelata.
Hadii ay tahey samafal, maal-galin, tacliin, halgan dagaal ama naf-hurid. Bulshadana kolba waayaha soo mara kaga talo-qaadato go'aamada lasoo gudboonaada duruufaha nolosha ee Kala duwan.
Sidoo kale bulshooyinku waxay soo Kala dhaxlaan shaqsiyaad kutari kuteen ah oo iyana hawl-maalmeed kooda qaar Ku Buuxiyaan, sida Araweelo, Dhagdheer iyo Cigaal Shidaad oo caruurta Lagu maaweeliyo.
Hadii aynu tusaale kooban is xusuusino, dalal Kala duwan oo aduunka ah.
Maatis Toong dalweynaha China waxa uu yahey aabaha ruuxiga ah ee qarankooda aasaasey, tusaale siyaasadeed
Sidoo kale Maxamed Iqbaal pakistan u yahey aabaha dhaqanka iyo jirtaankooda(identity).
Halka caalimkii Ibnu-Khalduun u yahey dalalka north of Africa khaasatan Tunisia astaan aqooneed ay Ku faanaan.
Gifaara(Che Guevara) waa astaanta halgan u yahey dhamaan dalalka central iyo Latin America iyo dhaq-dhaqaayada kacdoo ee aduunka sadexaad ee siyaasadaha bidixda.
Halka Maxamed Cali Kiley iyo Pele yihiin tasaalayaasha ciyaaraha (sports).
Hoos aan usoo dego, SL wey leedey dadkaas oo dhan Eebe na waa ugu deeqey shaqsiyaadkaas oo geedo dhaadheer ah.
Tusaale ahaan, tacliin Maxamuud Ahmed Cali. Siyaasad M. I. Cigaal. Halgan Lixle. Fanka Cali Sugule. Tusmo halkudhag Timacade iyo Hadraawi. Diin Sheekh Madar. Hanuunin Sh. Dirir . Wax u sheegid Sh. Mustafe X. Ismaciil, astaan samafal Adna Adan iyo astaan nabadeyn Xaaji Cabdi Waraabe.
Hadaba marka laga reebo Cigaal iyo Timacade oo Hargeysa Airport iyo Gabiley university loogu magac darey inta kaleba waa Ku dulmanyiin bulshada SL.
Waxa xusid mudan mararka qaar tusmooyinka Qaran in cidkale dafo. Tusaale ahaan manhajka school-da SL taariikhdii halgankiiSNM waxa Ku xusan kaliya Muuse Biixi.
Yeelkeedee, X. Cabdi Waraabe waxa uu Ku xardhanyey nabada maanta SL Ku naalooneyso oo ah waxa kaliya ee aynu u iibgeyno.
Hadaba, Xaajigu, khaanadee baa mudanyey in la dhigo?
Waxa soo ifbaxaya, in magacaa weyn ee inaga baxey Lagu sadqeeyo conflict studies department,
@ waa Xarunta laga barto xalinta khilaafaadka ee Jaamacada Hargeysa, xaruntaas oo xataa Madaxweyne Muuse Biixi kasaarey in uu CV giisa in uu ku darsado, in uu ardey u noqdey. Halka Madaxweynuhu mudo kooban uu geel-jireeyey Ku darey
(b) Xaruntan waxa maalgalisa UNDP waxa Lagu dhigaana dhamaan waa Ka duwanyey dhaqanka somalidu wax u nabadeyso.
(C) Xaaji Cabdi Waraabe waxa uu ahaa shaqsiyad guud, muu aheyn mid acadamic ah ama cilmi baadhe xalinta khilaafaadka macalin kasoo shaqeeyey.
Ugu dambeyntii Xaaji Cabdi maloogu magac dari doonaa caasimada Hargeysa sidii bishii hore Kazakhistaan madaxweynihii aasaasey ee iscasiley caasimadeeda loogu magac darey, oo Asitanah laga badaley Nuur Suldaan na loo bixiyey.
(2) Maloogu magac dari doonaa golaha guurtida SL oo ma loo bixin doonaa aqalka Sare ee Xaaji Cabdi.
(3) Malaga dhigi doona sumada astaamaha dicumentska xukuumada SL hadii noqon laheyd, shaambadaha teeda qoyan iyo teeda qalalan EE shahaadooyinka Lagu xardho (dry stamp) iyo sawirka lacagta Shilinka SL
Mise sidii halyeeyadii horaa dust-pin ka lagu tuuri doonaa oo si fudud lagu ilaawi. Jawaabta waxa laga sugayaa Madaxweynaha S.Land